Badeecada Reishi, Soosaarista likaha, Kaabsulka Kaabsulka ee likaha - Wuling
Waxaa la aasaasay 2003, Wuling waa shirkad bayoolaji ah oo ku takhasustay soo saarista iyo habaynta boqoshaada daawooyinka dabiiciga ah iyo kaabista cuntada.Laga soo bilaabo oo laga soo hormariyay Shiinaha, hadda waxaan ku balaadhinnay Kanada waxaanan bixinnay daraasiin alaabooyin kala duwan ah.
Beerta beerashada ORGANIC
Saldhigeena beeritaanka organic waxay ku yaalaan cirifka koonfureed ee Buur Wuyi, oo daboolaya dhul dhan 800 mu.Buurta Wuyi waa mid ka mid ah kaydadka dabiiciga ah ee Shiinaha, halkaas oo hawadu ay cusub tahay oo aan wasakhayn macmal ah, aadna ugu habboon koritaanka boqoshaada dawada.
waan taageersanahay oem
Laga soo bilaabo 2003 waxaan korinay macaamiishayada adduunka oo dhan waxaanan si joogto ah u dirnaa in ka badan 40 waddan oo kala duwan oo adduunka ah.Dhanka dhoofinta waxaan ku dadaalnaa inaan ku soo dirno waqtigii loogu talagalay oo aan haysano koox weyn oo tan maareysa.Waxaan leenahay koox ka badan 75 shaqaale R&D, iibinta iyo wax soo saarka.
R&D iyo ilaalinta tayada
Mar kasta oo wax soo saarka ah waxaan la soconaa alaabtayada heerarka maaddooyinka firfircoon ee laxiriira si aad u hesho maaddo saldhig oo joogto ah oo sarreeya ama alaab naga dhammaatay.Waxaan haynaa ISO 22000 shahaado waxaanan bixin karnaa warbixinnada tijaabada SGS sida loogu baahdo.Sidoo kale, tayadayadu waxay ka timaadaa xulashada faahfaahsan iyo heerarka adag ee alaabta ceeriin ee aan isticmaalno iyo hababka ugu fiican ee beerashada.
Budada Mushroom Daawooyinka
Ka sarreeya 20 nooc oo laga soosaaray likaha tayada sare leh.
Dhammaan maaddooyinka waxay ka yimaaddaan 100% jirka midhaha boqoshaada oo la xaqiijiyay.
Beta-Glucan waxay u dhaxaysaa 10%-98%.
Polysaccharides waxay u dhexeysaa 10% -98%.
Ma jiro hadhaaga sunta cayayaanka.
Tijaabada shaybaadhka ayaa ansixiyay Heavy Metal Standard.
Ma jiro wax buuxiya ama Dextrin.
Reishi polysaccharides soosaaray
Marka loo eego Compendium of Materia Medica, ganoderma lucidum waxay leedahay dabeecad fidsan, dhadhan qadhaadh, aan...
Magaca Alaabta Gaarka ah ee Libaaxa Mane Soo Saara Difaaca-Xoojiyayaasha Dalka Shiinaha
Cordyceps Milateri soo saarta budada
Cordyceps, oo loo yaqaan Cordyceps militaris, waa kakanaanta fungus Cordyceps militaris parasitic on t...
Ganoderma Ludicum soo saarta budada
Soo saarista Mushroomka Daawooyinka
Wuling biotech waxaa ka go'an in ay hubiso badbaadada alaabta likaha.Wuling biotech waxaa ka go'an inay hubiso badbaadada alaabta likaha.Heerarka tayada ee soosaarka likaha waxaa ka mid ah: muuqaalka boqoshaada, midabka iyo qayb ka mid ah, dhadhanka, urta, cabbirka mesh, cufnaanta, milanka, falanqaynta tayada iyo qiyaasta ee qaybaha bioactive, content qoyaanka, content ash, biraha culus, haraaga cayayaanka, , falanqaynta microbial, iwm Waxaan raacnaa heerarka tayada adag.
Cabbitaannada waxtarka leh ee waxtarka leh ee leh boqoshaada daawada lagu daray.
Waxyaalaha budada ah ee caanka ah ee la xaqiijiyay.
Qaxwaha, shaaha, budada khudaarta, budada turmeric, budada Macha, Probiotics, Protein Powder.
In ka badan 100 macaamiishu waxay ku qanceen caanaha iyo dhadhanka.
Laga soo bilaabo dhadhan ilaa sanduuqa dibadda.
Hal adeeg oo joogsi ah, U diyaar ah iib.
Daboolka budada ah ee ganoderma-ka jabay
Kaabsoosha Saliida Ganoderma Spore
Kaabsaloyinka budada ah ee Ganoderma Spore
Kaabsooshayaal Mushroom Daawooyin ah
In ka badan 100 qaaciido oo ay macaamiishu ku qanceen.
Soo saaraha GMP shahaado siiyay oo leh organic la ansixiyay.
FDA, USDA/EU ORGANIC, HACCP, ISO22000, KOSHER, Shahaadooyin XALAAL AH.
Xakamaynta tayada bilawga ilaa dhamaadka.
Alaabta la habeeyey laga bilaabo caanaha ilaa dhalada.
maxaan ka naqaanaa likaha dawada?
Gmp &fda shahaado.
Loo sameeyay 100% sumaddaada.
Khadka wax soo saarka wanaagsan.
Waxaan leenahay naqshadeeyayaasha xirfadlayaasha ah iyo naqshadeeyayaasha baakadaha si aan u habaynno astaantaada saxda ah!